Ny taombaovao Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 3:14 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny alin'ny taom-baovao Shinoa (28 Janoary 2006) dia heverina ho fetibe manan-danja indrindra ao Shina ary manamarika ny fiandohan'ny herintaona miaraka amin'ny fiavian'ny lohataona mafana izay antsoina ihany koa hoe Fetiben'ny Lohataona noho izany. Mibilaogy izahay ary miaraka mankalaza ny hariva amin'ireo bilaogera Shinoa, miaraka amin'ny sary, tantara sy ny maro hafa!
Antsoina hoe “Taonan'ny Alika” ity taona ity (2006). Misy andiany 12 ny taona izay hasongadina amin'ny karazam-biby miisa 12 tsirairay , ary ho an'ny Alika ity taona ity (2006). Mankalaza ity fety ity amin'ny alàlan'ny afomanga, fanasana, ary fivoriam-pianakaviana ny olona ao anatin'ny 7 andro hialan-tsasatra. ” Fitombokasen'ny Alika ” sy ny “Karatra Firariantsoa ho an'ny Taonan'ny Alika “
Ny fiaraha-misakafo no ampahany manan-danja indrindra amin'ilay fetibe, izay ahitana ny fihaonan'ny fianakaviana ny alina alohan'ny taom-baovao, ary rosoana sakafo nentim-paharazana Shinoa tahaka ny paty sy ny mofo. Manana sary vitsivitsy mampiseho ireo endriky ny sakafo i Andrea avy ao amin'ny T-Salon. Manana sary izay manazava ny dingana amin'ny fanaovana karazana mofo manokana antsoina hoe “Kok Tsai ” i Daxing Stef. Nitatitra ny lahatsoratra iray ao amin'ny masoivohom- baovao Xinhua fa nitentina 24.444 $ ny adihevitra manodidina ny fiaraha-misakafo.
Ny afomanga ihany koa dia ampahany tena mahaliana amin'ny taombaovao. Tokony hanomboka ny afomanga rehefa maneno ny lakolosy amin'ny 12 ora, izay midika hoe “Veloma ry taona farany ary Miarahaba ny taona vaovao.” Na izany aza, norarana na noferana ho an'ny faritra sasany ny afomanga nandritra ireo taona vitsy izay noho ny antony ara-piarovana sy ny antony ara-tontolo iainana any amin'ireo tanàndehibe tahaka an'i Beijing. Tamin'ity taona ity (2006) dia nesorina ny fandraràna ary nandefa hafatra fohy tamin'ny alàlan'ny finday ny polisin'i Beijing mba hampahatsiahivana ny olom-pirenena mba hitandrina amin'ny fandefasana afomanga.
Tranga mihamitombo ao Shina ihany koa ny fandefasan-kafatra (SMS). Mampiasa izany ny olona mba handefasana firariantsoa sy fitahiana ho an'ny namany, mpiara-miasa ary havana. Tombanana fa nandritra ny Fetiben'ny Lohataona izay naharitra nanomboka ny 29 Janoary ka hatramin'ny 4 Febroary dia nisy hafatra maherin'ny 10 lavitrisa nalefa tao amin'ny firenena.
Aorian'ny fisakafoanana hariva no tonga ny “Fetiben'ny Lohataona amin'ny Alin-kira” ao amin'ny fahitalavitra China Central. Lasa iray tamin'ireo fialamboly lehibe ho an'ny Shinoa izy io nandritra ny 20 taona farany, izay ahitana mpanakanto malaza maro, mihira sy mandihy ary ny fampisehoana nentim-paharazana tahaka ny akon-dresaka. Saingy nihena be ny fientanam-bahoaka noho ny habetsaky ny fialamboly. Milaza aminao ny antony i Raymond Zhou, bilaogera sy mpitsikera sarimihetsika. Mampiasa ny teny noforonin'i Susan Sontag hoe “Camp” [toby] izy mba hamaritana izany.
Nanome soso-kevitra vitsivitsy tamin'ny Taom-baovao ho an'ireo olona tany Shanghai i BingFeng ary nanatontosa ny bilaogin'ny Taombaovaony.
Nanoratra lahatsoratra mahaliana momba ny fahalalany ny Taombaovao Shinoa i Wayne, Amerikana monina any Xiamen, Shina ary nanolo-kevitra amin'ny fanampiana ny vahiny mba hanamarika ny fetibe toy ny teratany.
Nanoratra ny faniriany tamin'ny taombaovao i Laoluo, bilaogera malaza. Nandika ny ampahany tamin'ny lahatsorany ny China Digital Times.
Mampianatra anao ny fomba famakiana sy ny fanononana ny fiteny Shinoa sy ny tarehin-tsoratra izay lazaina matetika rehefa mihaona amin'ny olona ao amin'ny fetibe ny Benetleong .
Jereo ny sary maromaro ao amin'ny Flickr, anisan'izany ny akanjo, ny fampisehoana, ny taratasy miverina, ary ny parady ao an-tanàndehiben'i Shina.
Lahatsoratra fanampiny ao amin'ny Technorati sy Icerocket.